बर्षौदेखि बन्द विमानस्थलमा बढ्यो चहलपहल, बलेवामा सोमबार परीक्षण उडान - TV Annapurna
राजु सुवेदी, टिभी अन्नपूर्ण , काठमाण्डौ ।
सरकारले बन्द विमानस्थल सञ्चालनका लागि सक्रियता देखाएपछि लामो समयदेखी बन्द रहेका विमानस्थल फेरि सञ्चालनमा आउन थालेका छन ।
दाङको टरिगाँउ विमानस्थल नयाँ सम्झौता अनुसार चल्न थालेको ३ महिना नपुग्दै २५ बर्षदेखि बन्द अर्को विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
लामो समयदेखी गौरचनमा परिणत भएको बलेवा विमानस्थलमा आउँदो हप्तादेखी नियमित उडान हुने पक्का भएको हो ।
फागुन २३ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भएको त्रिपक्षीय सहमति पछि अब बलेवा र यस आसपासका बासिन्दा जहाज चढेर काठमाण्डौ आउन पाउने भएका हुन ।
बन्द विमानस्थल पुनर्सञ्चालनका लागि सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई यस्ता विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनर्सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरणकोे प्राविधिक समूूहले गरेको अध्ययनले गोरखाको पालुङ्टार, र रोल्पाको वडाचौर विमानस्थल बाहेकका सबै विमानस्थल सञ्चालन गर्न योग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोही निष्र्कषका आधारमा प्राधिकरणले स्थानीय निकाय र निजी कम्पनीलाई आग्रह गरेपछि बन्द रहेका विमानस्थलमा नियमित उडानको प्रक्रिया अघि बढेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम बताउनुहुन्छ ।
अहिले देशभर रहेका ५६ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा विमानस्थल चलेपनि १६ विमानस्थल बन्द छन । तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न कारणले बन्द भएका सबै विमानस्थल सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहल थालेको छ । जसका लागि केही समय स्थानीय तहको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेकाले आफूहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल चलाएको गौतमको भनाई छ ।
प्राधिकरण र निजी विमान कम्पनीका प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको सम्झौतामा स्थानीय नगरप्रमुख जनकराज पौडेल र नेपाल एयरलाइन्स वाणिज्य विभाग प्रमुख जनकराज कालाखेतीले हस्ताक्षर गरेर आउदो ९ गतेदेखी नियमित उडानको टुंगो लगाएका थिए ।
पौडेल र कालाखेतीले हस्ताक्षर गरेकोे सम्झौतामा प्रत्येक उडानमा १२ सिटभन्दा कम यात्रु भए नगरपालिकाले सिट भारवहन गर्ने उल्लेख छ ।
तत्कालका लागि नेपाल एयरलाईन्स र तारा एयरले बिहीबार र आईतबार हप्ताको दुईवटा उडान भर्नेछन् । जसका लागि नगरपालिकाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने तथा टेष्ट फ्लाईट लगत्तै दुई वायुसेवा कम्पनीलाई दश दश लाख रुपैयाँ अग्रीम जम्मा गर्ने छ ।
जहाज चल्ने खबरले हौसिएका बाग्लुङबासीबीच उडान गर्ने विमानका लागि हरेक फ्लाईटमा नगरपालिकाले १२ यात्रुको ग्यारेण्टी गरी अग्रिम भुक्तानीसमेत दिनुपर्ने सहमतिले नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक भार पर्र्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ । तर छिट्टै दैनिक उडान हुने अपेक्षा गरेका नगरप्रमुख पौडेल नियमित उडान हुने पक्का भएपछि यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले भारवहन वापतको आर्थिक भार धेरै समय नटिक्नेमा ढुक्क छन ।
२०१७ सालमा निर्मित बलेवा विमानस्थल २०१९ बाट नियमित सञ्चालनमा आएपनि २०४९ सालदेखि २६ बर्षसम्म गौचरनको रुपमा थियो । पहिलोपटक २०१८ सालमा पिल्सपोर्टर हवाई जहाजले बलेवा विमानस्थलमा टेष्ट फ्लाईट गरेको थियो । टेष्ट फ्लाईटको १ बर्षपछि नियमित उडान शुरु भएको विमानस्थलले बि.स. २०४९ सालसम्म पोखरा, भैरहवा र काठमाण्डौ उडान गदै आयोे । पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग निमार्णपछि बन्द भएको विमानस्थल संचालन गर्न २ बर्षअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टसँगै नेपाल एयरलाईन्सको विमानले टेष्ट फलाईट गरेको थियो । नियमित उडानका लागी केही प्राविधिक कठिनाई देखेपछि उडान नियमित गर्ने प्रक्रियाले भने मूर्त रुप पाउन सकेन ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं तत्कालिन शिक्षमन्त्री दिनानाथ शर्माले विमानस्थल सुचारु गर्ने पहलस्वरुप मन्त्री विष्टसहित गरेको टेष्ट फ्लाईटमा देखिएका केही प्राविधिक कठिनाईको समाधानका लागि सरकारले १ करोड विनियोजन गरेको थियो । सोही रकमले धावनमार्गका संकेत मर्मत तथा जीर्ण तारबार व्यवस्थापनको काम सकिएको छ । यसबाहेक टर्मिनलको फर्निचर तथा विद्युत मर्मत तथा व्यवस्थापन एंव उडान प्रभावित हुने स्थानका रुख काट्ने कामसमेत पूरा भईसकेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलमध्ये वर्षात्को समयमा पहाडी भेगका अधिकांश विमानस्थल बन्द हुन्छन् । ताप्लेजुङ, लामिडाँडा, कांगेलडाँडा, थामखर्क, दाङ, मनाङ, मेघौली लगायतका विमानस्थल बर्षेनी वर्षात्का कारण प्रभावित हुने गरेका छन्। केही विमानस्थल त असारदेखी भदौ अन्त्यसम्म मिति नै तोकेर बन्द हुने गर्दछन । तर बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग चलिरहेका धेरै विमानस्थलको भन्दा स्तरीय देखिएकाले सामान्य मर्मतबाटै डोनियर र ट्वीनअटर जहाज अवतरण गराउन सकिने पोख्ररेल बताउछन ।
विमानस्थल सञ्चालनको सबै तयारी पूरा भएपछि सोमबार बिहान ११ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले टेष्ट फलाईट गर्नेछ । टेष्ट फलाईटअघि नै भाडादर निर्धारण गर्ने तयारी भएपनि भाडादर कति हुने भन्ने बिषयमा भने अझै वायुसेवा प्रदायक कम्पनी र प्राधिकरणबीचमा सहमति हुन सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि दुर्गम क्षेत्रका लागि निर्धारण भएको भाडादर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै तारा एयरले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भाडादरमा असहमति राखेपछि भाडादर निर्धारणमा ढिलाई भएको बुझिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाण्डौदेखि बलेवा सम्मको ९७ माइलका लागि ४५ मिनेटको दुरी भएकाले एकतर्फी ५ हजार प्रस्ताव गरेको थियो । तर तारा एयरले भने ६ हजार बढि भाडादर कायम हुनुपर्ने दबाब दिएकाले भाडा निर्धारणमा ढिलाई भएको स्रोत बताउछ ।
बाग्लुङको प्रसिद्ध चैतेदशँै मेला शुरु हुन अब १ हप्तामात्रै बाँकी छ । यहीँ समयमा जहाज चल्ने भएपछि बलेवा बाहेक बाग्लुङ पर्वत र म्याग्दीसम्म खुसीको लहर छाएको छ । पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग निमार्णपछि बन्द भएको विमानस्थल चीन भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको ट्याक खुलेसँगै बढी चर्चामा आएको हो । यसबाहेक पर्वत सदरमुकामदेखी बलेवा जोड्ने दुई ठुला झोलुंगेपुल निमार्णले बलेवा बिमानस्थलको आवश्यकतालाई झन फराकिलो बनायो यद्यपि तत्काललाई भारवहन ग्यारेण्टीको शर्तमा शुरु हुने उडानले निरन्तरता पाउनेमा भने अझै आशंका रहेको भुक्तभोगीहरु बताउछन् ।
आर्थिक हिसावले नेपालका सबैजसो आन्तरिक विमानस्थल घाटामा छन् । विराटनगर, भैरहवा, पोखरा र नेपालगञ्जबाहेकका विमानस्थल एकतर्फ सहज विमान चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने अर्कोतर्फ करोडौँ खर्चेर बनाइएका विमानस्थल पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा थप घाटा बेर्होन बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुको अभाव हुनु तथा अधिकांश यस्ता विमानस्थलमा चल्न सक्ने प्रयाप्त साना विमान नहुँदा विमानस्थलको प्रतिफल राम्रो छैन ।
एउटै विमानस्थलका लागि झण्डै १६ करोड बढी खर्चेर कालोपत्रे गरिएका रारा, मुगु, डोल्पा, सिमिकोट लगायतका विमानस्थलसमेत कहिले यात्रु त कहिले विमान अभावमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । यद्यपि बलेवा विमानस्थल भने यात्रु र विमान दुवै हिसावले महत्वपूर्ण हुने बुझाई छ सांसद डा. सुर्य पाठकको । आफु निर्वाचित भएलगत्तै २ दशक पहिलेदेखी बन्द रहेको विमानस्थल फेरि सञ्चालन हुने भएपछि हौसिएका पाठक यसको निरन्तरताको जिम्मा आफ्नै काँधमा आएको बताउछन ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागी बाग्लुङ नगरपालिकाले ठुलो आर्थिक भार व्यहोर्न तयार भएको छ ,जुन सराहनीय छ । तर सधै नगरपालिकाले घाटा व्यहोरेर विमान चलाउने अवस्था आउनुहँुदैन । यसका लागी स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायकोे सकारात्मक सहयोग रहनुपर्ने पाठकको भनाई छ ।
२०११ सालदेखी शुरु भएको दाङको टरिगाँउ विमानस्थल ४९ सालमा बन्द भएपनि ४ पटकसम्म पुनर्सञ्चालनका लागी पहल भयो । स्थानीय नेताहरुको पहललाई उड्डयन प्राधिकरणले होस्टेमा हैसे गदै विमानस्थल संचालन गरेपनि अदूरदर्शी योजना र चरम नाफामुखी विमान सेवा कम्पनीका कारण यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यद्यपि पछिल्लो पटक गएको पुष २२ गतेदेखी पाँचौपटक सञ्चालनमा आएको छ । सोही विमानस्थलकोे उदारहण दिदै पूर्वसासंद प्रकाश पौडेल बलेवा विमानस्थलको निरन्तरताका लागि स्थानीय नगरपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउछन ।
विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई बाग्लुङसम्म पुग्न अहिलेपनि समस्या रहेको भन्दै निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रे गरि नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पौडेलको धारणा छ ।
न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार निमार्णकै क्रममा थालनी हुन लागेको विमानस्थलको निरन्तरताका लागि प्रशस्त चुनौती छन् । बाग्लुङ सदरमुकामदेखी विमानस्थलसम्म पुग्ने बाटो व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले १० लाख विनियोजन गरे पनि सामान्य मर्मत बाहेक तत्काल सम्भव छैन । होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्किङ, नियमित सञ्चालन हुने यातायातका साधनको पनि व्यवस्था छैन । यसबाहेक भौगोलिक कठिनाई, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा विमानस्थल प्रभावकारी बन्नेमा धेरैको आशंका छ । मुलुकभर रहेका कुल ५६ विमानस्थलमध्ये सञ्चालनमा रहेका ३४ वटा विमानस्थलकै लागि पनि प्रयाप्त विमान नभएको भन्दै समयमा उडान नहुने समस्या हवाई यात्रुहरुले भोग्दै आएका छन । यसमा पनि पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल जहा अत्यन्तै साना डोर्नियर र टिवनटर विमानमात्रै चल्न सक्छन । जुन मागको तुलनामा निकै कम छन् । यस्ता विमानको भर पर्नुपर्ने बलेवा विमानस्थलमा यात्रुको ग्यारेण्टीका लागी नियमित उडानको ग्यारेण्टी जरुरी देखिन्छ ।
बलेवा एयरपोर्ट यसरी चल्दैछ भिडियोमा :